Sheekadii Ganacsiga Diinka Oo Cirka Maraysa, Dillaal Diinka Iibiya Oo Faahfaahinaya Qiimaha Iyo Noocyada La Iibsanayo Iyo Dad Badan Oo Durba Keymaha U Galay Sidii Ay Diin U Raadsan Lahaayeen | Baarcadeeye
Sheekadii Ganacsiga Diinka Oo Cirka Maraysa, Dillaal Diinka Iibiya Oo Faahfaahinaya Qiimaha Iyo Noocyada La Iibsanayo Iyo Dad Badan Oo Durba Keymaha U Galay Sidii Ay Diin U Raadsan Lahaayeen
Mid Ka Mida Dillaaliinta Diinka Oo Sharraxaya Cidda Iibsata Diinka, Qiimaha Uu Joogo Iyo Noocyada Saxda Ah Ee Qiimo Lacageed Oo Wanaagsan Goyn Kara
Hargeysa, December, 28, 2017 (Baarcadeeye)- Tan iyo intii ay labadii maalmood ee ugu dambeeyey si weyn u soo shaac baxday in ganacsi weyni ka soo kordhay Diinta lana wariyey in Magaalada Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya ee aynu jaarka nahay qiimo lacageed oo aad u sarreeya lagaga iibsanayo Xayawaanka xammaaratada ah ee Diinta ayaa waxa magaalo iyo Miyiba shacabka Somaliland hadal hayaan sidii looga faa’idiaysan lahaa jaaniskaasi ganacsi ee Kumannaanka Kun ee Dollar ah ee lagu sheegay in xabbadda diinta ahi goonayso iyada oo durba dadka qaarkii ka fekerayaan sidii ay duurka ugu gali lahaayeen dhawr diin oo ay soo qabsadaan oo ay Xamar u iib geeyaan.
Maxamed Yuusuf Xaayow oo ah dillaal ka shaqeeya sayladda iib ee dhinaca Diinka ee ka dillaacday dalkaasi Soomaaliya oo ku nool Magaalada Muqdisho, sheegayna in uu shaqadiisii hore isaga tagay oo imika uu yahay Dillaal iibka Diinka ah ayaa shgarraxay xaqiiqanimada iibkan la sheegay iyo astaamaha uu leeyahay Diinka qiimo lacag badan ah goyn karaa waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya sidan: “Dadka sheekadani soo gaadhay qaar si dhab ah ayay u qaateen qaarna si malo awaal ah. Wali dadku si wanaagsan uguma baraarugsana. Waxaan umadda Soomaalida u sheegayaa in ay arrintani dhab tahay. Qiimaha Diinka la kala siisanayaa waa kala duwan tahay qaar way sarraysaa, qaarna waa dhexdhexaad, qaarna waa hooseeyaa. Ninka doonaya in uu iibsado Diinku su’aasha ugu horreeya ee uu ku waydiinayaa waxa ay tahay Taleefanka ma Daminayaa (Bakhtiinayaa)?, wuxuu ku odhanayaa soo tijaabi, kadib waannu baxaynaa waxa aad u tagaysaa ninkii Diinka hayay. Taleefanka ayaad saaraysaa inuu ku damaayo iyo in kale. Haddii uu Taleefanku ku bakhtiyayo waxa aad la xidhiidhaysaa ninkii doonayay iibkiisa. Kadib waxa uu ku odhanayaa lacagta maxay ku rabaan.
Isagu waxa uu kuu sheegayaa qiime dadka diinka wataana lacag ayay kuu sheegayaan. Kadib marka lacagaha la isku af-garto ayaa la kala qaadanayaa oo Diinka la kala iibsanayaa. Laakiin inta badan Diinka hadda Xamar jooga Taleefanku kuma bakhtiyayo”.
Telefishanka Somali Cable oo ninkan Dillaalka ah waydiiyey bal astaamo kale oo lagu garan karo Diinka ay doonayaan dadka iibsanayaa oo aan ahayn in uu taleefanka ku damayo ayaa ugu jawaabay sidan: “Waxa ay ku odhanayaa waa inuu qabsadaa Birlabta. In Anteennada taleefanku tagayso oo uu Network-ga luminayo. Waa in uu sida Birlabta oo kale wax ku dhagayaa oo uu qabsanayaa Boolasha, Makiinadaha iyo walxaha la mid ah ee birta ah. Haddii aanu intaa midna samaynayn rajo ma laha lamana iibsanayo. Dadka doonaya iibka Diinku waxa ay sheegayaan in Diinka Teleefanka bakhtiinayaa uu yahay diin liqay marka hore jowharadda Maska sidaasi darteed ayuu taleefanka u daminayaa. Waxa ay ku leeyihiin midna inta uu liqo ayuu matagayaa kaasi waa ka Anteenka Moobilka ka kaxaynaya Birlabtana leh, kaasi dambe qiimihiisu waa yar yahay”.
Ugu dambayn ninkan Dillaalka Diinka ah ee Maxamed Yuusuf Xaayow oo ka hadlaya qiimaha dhabta ah ee Diinka la kala siisanayo waxa uu yidhi: “Haddii ay shirkadi doonayso oo la helo diinka Taleefanka damninaya waxa uu qiimihiisu gaadhi karaa 200 oo Kun oo dollar. Waa haddii uu Taleefanka damiyo, taleefankaasina aanu rajo dambe yeelan oo aanu shaqayn wixii intaa ka dambeeya marka Diinka la dul dhigo ee uu damiyo. Kuwa kale qiimahoodu intaasi waa uu ka hooseeyaa”. Ayuu yidhi Dillaal Xaayow.
Si kastaba ha ahaatee in badan oo ka mid ah shacabka Somaliland oo maqlay suuqa ganacsi ee Diinka ee ka dillaacay dalkaasi Soomaaliya ayaa hanqalka la kacay iyaga oo durba dadka qaar Bilaabeen in ay keynta u baxaan oo ay tijaabiyaan diinka taleefanka Bakhtiinaya lamana oga halka ay sheekadani ku dambaybn doonto.